Textile Spinning Rings & Ring Travelers Emeputa na India | X-axis Textile Spinning Rings & Ring Travelers Emeputa na India | X-axis
Ndị njem mgbanaka
Mgbanaka pụrụ iche
Mgbanaka mgbanaka - X Optimax Mgbanaka na-atụgharị - XL - R Mgbanaka na-atụgharị - XL - C Ịgba mgbanaka - X Tensa Mgbaaka mgbanaka - X Gen Rings Mgbanaka ịgba - mgbanaka nha pụrụ iche Mgbanaka mgbanaka - xl-n Ndị njem mgbanaka - X Optimax Ndị njem mgbanaka - xlrs Ndị njem mgbanaka - xl-cs Ndị njem mgbanaka - xendowrs Ndị njem mgbanaka - xendowcs Ndị njem mgbanaka - Xgen RS Ndị njem mgbanaka - xgencs Ndị njem mgbanaka - Jtraveller
Usoro mmepụta nke X-Axis na-esote na-ejikọta mgbasa ozi nhazi nkenke nke teknụzụ nke na-eme ka ọ dị mma n'ofe oke ọ bụla.
Oke ≠ Uru
Ọ bụghị mbọ niile na-eme nke ọma na-arụpụta ihe. Na X-Axis anyị ghọtara nke a wee nye mgbanaka na-agba agba na ndị njem na-enyere onye na-agbagharị aka inweta ezigbo uru.
Ndị na-eduzi spinners tụkwasịrị obi
Spinning Rings & Ring Travelers na-enye aka n'ịmepụta yarn dị mma. A na-eji ụdị ngwaahịa X-Axis eme ihe nke ọma site na ndị na-eduzi spinners n'ofe ụwa¸ ndị nwere ike ịtụgharị yarn dị mma.
Mgbanaka mgbanaka pụrụ iche & ndị njem mgbanaka nwere uru Triple 'O'
Mgbanaka dị iche iche nke X-Axis rụpụtara nwere ike izute ụdị mgbanaka ọ bụla chọrọ. Emebere ngwaahịa ọ bụla ka ọ nye nsonaazụ ka mma yana otu-nkwekọrịta kachasị mma & na-emepụta mma na-enweghị nnukwu mgbanwe n'oge ndụ ya niile. Nke a na-enyere ndị spinners aka imepụta yarn dị mma.
Oke pụrụ iche nwere uru Triple O
Mgbanaka eriri maka ajị anụ, acrylic, njọ & nke kacha njọ
Otu n'ime oke kachasị elu
Mgbanaka ntụgharị ihu igwe nwere mkpuchi pụrụ iche
Akụ na ụba, dị mma maka 20s ruo 40s
Ndị njem mgbanaka nke X-Axis na-ekpuchi ọnụ ọgụgụ eriri na yarn dum. Amara maka ogologo ndụ ya, a na-eji teknụzụ kachasị ọhụrụ eme ihe ndị a ma na-abịa na njedebe kachasị elu na metallurgy. A na-enweta ya n'ụdị mmecha dị iche iche iji kwado mkpa spinners dị iche iche.
Kedu ihe kpatara edoziri otu, Mgbe ị nwere ike nweta ha atọ?
Ndị Spinners taa na-achọ ihe nrụpụta, nke na-akarị oke na ịdị mma. Ihe mmepụta nke a tụrụ site na mbelata ezughị okè na nke a na-ahụ anya na uru net, na uru nke Yarn.
Na-eme nke ọma ọbụna mgbe ọ na-arụ ọrụ na oke ọsọ ma na-ebelata ezughị okè nke ukwuu. Ọ na-enyere aka wuo ọbụna Cop na-eji ire ụtọ, siri ike na ọbụna yarn, Cop after Cop.
Na-arụ ọrụ nke ọma n'oge ndụ ya niile ma na-enyere aka n'ịmepụta na-aga n'ihu, yarn dị mma na njedebe njedebe kacha nta; ebe ahụ site n'ịbawanye arụmọrụ nke Spinning, Weaving, Knitting, Dyeing and Finishing Machine.
Rimtex Engineering Pvt. Ltd (An ISO 9001: 2015 TUV Certified co) Regd ụlọ ọrụ & osisi: 2701, GIDC Phase IV, Wadhwan 363 035, Gujarat, India
© Copyright 2021 Rimtex Engineering Pvt. Ltd. Ikike niile echekwabara